नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘अन्डरलाइन’ राखेर आयोगमा दर्ता
काठमाडौँ, ३ जेठ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकतापछि बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यसअघि नै आयोगमा दर्ता भइसकेकाले पार्टीको नाममा अन्डरलाइन गरेर नयाँ पार्टी आयोगमा दर्ता भएको हो। पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा पुगेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘नाममा अन्डरलाइन गरेर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेका छौँ।’
बुधबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आज आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न पुग्दा अर्को पार्टी समेत दर्ता भएपछि अन्डरलाइन राखेर पार्टी दर्ता भएको हो।
आयोगमा कहिले दर्ता थियो नेकपा ?
दुई ठुला वाम दलले नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने निर्णय गरेका बेला यो नामको पार्टी २०६९ सालमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको खुलेको छ। त्यस पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले २०६९ सालमै नेकपालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आयोगमा दर्ता गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ।
आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यही नामको पार्टी पुनः दर्ता नहुने तर्क कट्टेलले गर्दै आएका छन्। उनले सत्ताको बलमा आफ्नो पार्टीकै नाममा आयोगले दर्ता गरेमा आफू अदालतमा जाने चेतावनी दिइसकेका छन्। कट्टेलले आफ्नो विचार पनि फरक रहेको बताउँदै एमाले–माओवादीसँग एकता पनि नहुने बताइसकेका छन्। उता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै सक्रिय छ। यद्यपि यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन। यही समस्या समाधानका लागि नयाँ पार्टीको नामलाई अन्डरलाइन गरेर दर्ता गरिएको हो।
नामको समस्या ?
पटक पटक टुटफुटबाट गुज्रेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई यसअघि पनि नामको समस्या पर्दै आएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि पनि कम्युनिष्ट टुटफुटबाट गुज्रेका थिए। नेकपा एकता केन्द्र बन्नुअघि नेपालमा दुईवटा मसला सक्रिय थिए। त्यो बेला मसालका पनि दुई रुप थिए। मसालका दुई घटकको नाम पनि मोटो र पातलो राखिएको थियो। मसाल पछि गएर नेकपा एकता केन्द्रमा रुपान्तरण भयो।
त्यसपछि माओवादी जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि पनि माओवादीका नाममा धेरैवटा पार्टी सक्रिय भए। त्यसबेला मातृका प्रसाद यादवले पनि नेकपा माओवादी खोलेर सक्रिय भए भने मोहन वैद्यले पनि आफ्नो पार्टीको नाम माओवादी नै राखे। तर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि समस्या भएपछि कसैले माओवादी क्रान्तिकारी त कसैले माओवादीमा अन्य नामको पुच्छर जोडेर सक्रिय भए। त्यही क्रममा बिहीबार दर्ता भएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा दर्ता हुँदा अन्डरलाइन गरिएको हो।